Antonio Valencia oo qorsheenaya inuu ka dhaqaaqo Manchester United, sababa la xiriira… – Gool FM
Antonio Valencia oo qorsheenaya inuu ka dhaqaaqo Manchester United, sababa la xiriira…
(Manchester) 15 Dis 2018. Wargeyska “Daily Mail” ee ka soo baxa dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Manchester United ay haysato dhibaatooyin badan, taasoo loo aaneenayo inuu sabab buuxa u yahay macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho.
Warar soo baxay ayaa waxay shaaca ka qaadeen in kabtanka kooxda Manchester United Antonio Valencia uu doonayo inuu ka dhaqaaqo safka Red Devils, sababa la xiriira khilaafka kala dhexeeya macalinka reer Portugal.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in Antonio Valencia uu eeganayo dalabyada uu ka helayo kooxaha qaar ee dalka England si uu kaga dhaqaaqo garoonka Old Trafford.
33 jirkan ayaa xiliyadii lasoo dhaafay ay soo noq noqotay dhaawacyadiisa, taasoo ka dhigtay in door yar uu ku yeesho qorshaha tababare Jose Mourinho, waxaase intaas sii dheer in Red Devils-ka ay dhawaan sameesay saxiixa Diogo Dalot.
Si kastaba saxaafada gudaha England ayaa inbadan ka hadashay khilaafka Jose Mourinho iyo ciyaartoy badan ee ku sugan kooxda Manchester United, waxaana ka mid ah Pogba, Lukaku iyo Valencia.
Shaxda rasmiga ah ee Manchester City Vs Everton